Fullerenes: njirimara, njirimara na ngwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ngwakọta ngwungwu a na-eji n'ụwa nke physics ma nwee nnukwu ọrụ. Ọ bụ ihe gbasara Ugochukwu. Ma ọ bụ usoro nke atọ kachasị sie ike nke carbon mara taa. Ọ nwere ike were ọdịdị, elliptical, tube ma ọ bụ ọdịdị mgbapụta. Achọpụtara ya na mberede na 1985.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, nchọta na ngwa nke fullerenes niile.
2 Ngwa nke fullerenes
3 Njirimara nke fullerenes
Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara Fullerenes Harold Kroto, Robert Curl na Richard Smalley na 1985 na US Ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọghọm ma ha mere ka ọ dịrị ha ohere ịnata Nrite Nobel na Chemistry na 1996. Edere patent ahụ na 1990 wee bipụta ya. Ndị a bụ ihe owuwu ọhụrụ kwụsie ike nke ụmụ irighiri carbon. N'ezie, a maara ha dịka nke atọ kachasị mara amara nke carbon karịa diamond na graphite.
Fullerenes ghọrọ usoro n'ihi nnwale emere na mkpụrụ ndụ carbon. Ihe nchọpụta ihe eji emepụta ihe na-ezo aka na usoro izizi iji mepụta ọnụọgụ nke ihe ahụ abanyela na nchọpụta nke ihe ahụ n'onwe ya. Ihe a nwara ime patent bụ ụzọ ịmepụta n'ọtụtụ buru ibu na fullerene iji nweta uru na ya.
N’afọ ahụ, e mere nnwale dị iche iche. Na Mahadum Rice dị na Houston, Harold Kroto nke Mahadum Southampton na Richard Smalley na Robert Curl nke Rice, mere nnwale nke gbadoro ụkwụ n ’i toomi ọnọdụ niile ha mere n’akụkụ kpakpando. Ebumnuche nke nnwale a bụ ịmata etu esi akpụpụta ụmụ irighiri ihe dị na mbara igwe. Iji mee nke a, ha gbara ọkụ ọkụ laser siri ike n’elu ikuku carbon n’ihu ikuku helium. Na mbu, anwale ya site na hydrogen na nitrogen mana emechaa na nitrogen.
Ozugbo agwakọtara eriri laser na carbon ebe a na-enwe helium, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta otú carbon gas si ejikọta na helium iji mepụta ụyọkọ. A ghaghị ikpo gas dị nso na zero zuru oke iji mee nyocha nke ụdị ụyọkọ ahụ. Ha mechara bụrụ C60, nke pụtara nke ahụ enwere carbon atom 60 na otu molekul. N’oge ahụ, ndị sayensị ahụbeghị ụdị ihe ahụ. Ma ọ bụ na ọ bụ akụkụ dị okirikiri nke na-echetara Buckminster Fuller geultic vault, yabụ aha fullerenes.
Ngwa nke fullerenes
Ebe ọ bụ na ha enweghị ike iwepụta ihe ọzọ zuru ezu na kọmputa, ha ga-eji akwụkwọ, mkpa, na teepu. Nke a bụ otu esi eme ogige a dị ka fullerenes. Anyị maara na atọm atọm ha na-ejikọta ibe ha ma nwee ike ijikọ ọnụ iji mepụta agbụ polymer. A na-ejikarị polymer ndị a eme ihe na ngwaahịa dịka iko plastik na karama.
Otu n'ime ihe ndị kachasị ịtụnanya nke fullerenes bụ na ụfọdụ n'ime ha nwere elektrọn site na atom nke edozigharịrị. Enwere ike ịsị na omume ndị electrons a dị ka a ga - asị na ha aghọtaghị na ha bụ akụkụ nke nhazi nke carbon. Nke a pụtara na ụdị omume a, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye atom ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe iji wuo superconductors ma ọ bụ insulator. Mgbe emechara patent ahụ, edere ọtụtụ akụkọ gbasara fullerenes na ohere ọ nyere.
Ọ bụ ezie na ogige ndị a ka dị ọhụrụ, ndị sayensị nwere echiche dị iche iche nke yiri ka ha ga-agbanwe usoro nke fullerenes iji mepụta eriri dị mma nke na nwere okpukpu 200 ike nke ígwè. O yiri ka otu n'ime ojiji nke fullerene bụ ịmepụta obere tweezers iji kpokọta otu ụmụ irighiri ma ọ bụ ihe na-arụ ọrụ iji buru obere ọgwụ ma ọ bụ ọta megide redioactivity. A pụkwara ịtụgharị ya n'ime ngịga nke nwere ụfọdụ ụmụ irighiri ihe ndị na-enye ndị ọzọ pere mpe aka. Ọ bụrụ na agbakwunyere ụdị atọm ndị ọzọ, enwere ike ịnweta ikike ụfọdụ, dịka iji atụ eletrik elele.
Njirimara nke fullerenes
Ndị a bụ ihe owuwu oghere nke enwere ike ịmepụta na okike n'ihi ọkụ ma ọ bụ àmụmà. Ọ bụrụ na anyị nyochaa ha n'anụ ahụ, anyị ga-ahụ na ha dị n'ụdị ntụ ntụ odo. Ihe ngosi sayensi ya bu C60 ma na-arutu aka na onu ogugu carbon n’otu igwe. Ha nwere ike nrụrụ ma laghachi n'ụdị mbụ ha mgbe nrụgide a na-etinye ha na-amalite ibelata.
Uru nke fullerenes na mkpa maka patenting bụ na ha na-eguzogide ọgwụ. Ma ọ bụ na iji bibie ihe ndị a, achọrọ okpomọkụ karịa 1000 degrees. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a anaghị adị mfe ọpụpụ kwa ụbọchị. Site n'inwe ọdịdị mechiri emechi na nke nwere mmetụta, ọ na-enye nnukwu nguzogide nrụgide. O nwere ike iguzogide nrụgide nke ikuku 3000.
N'etiti ihe onwunwe nke fullerenes anyị na-ahụ ihe onwunwe ha n'ite mmanụ. Ike mmanu mmanu bu ihe enyere site na ike adighi ike. Mkpụrụ ndụ ya nwere ike ịgbakọta iji mepụta ihe siri ike na nkekọ siri ike karị. Nke a siri ike mara site na aha fullerite. Ọ bụrụ na anyị ekpughere fullerene ka ọ dị obere ala, anyị ga-ahụ na ha nwere ike ịmachapụ ha na-efunahụghị ngalaba. Mkpụrụ ndụ ya na-arụ ọrụ nke ọma ma na-enwe njikọ na atọm nke na-enye elektrọnọn.
Anyi nwere ike ikwubi na fullerenes bu ihe ohuru nke n’emeputa ihe emekoro uzo abuo ma nke ahu n’enye oke mmasi n’obodo sayensi. Karịsịa nke a mmasị dị site n'echiche nke superconductivity. Na-aga n'ihu nyocha niile na ihe ndị a nwere ike melite teknụzụ dị ugbu a maka imepụta ihe bara uru maka ọdịnihu.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na sayensị na-akpali nnọọ mmasị ihe nwere ike chọpụtara dị ka a N'ihi nke njehie ma ọ bụ ịchụso dị iche iche ebumnobi. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere fullerenes na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Fullerenes
Kedu ihe bụ nkwenye